भारतका पूर्वजर्नेलको खु’लासा : हिन्दु राजालाई ‘डिस्ट्रोय’ गर्न माओवादीलाई शक्तिमा पुर्यायौं – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
भारतका पूर्वजर्नेलको खु’लासा : हिन्दु राजालाई ‘डिस्ट्रोय’ गर्न माओवादीलाई शक्तिमा पुर्यायौं
काठमाडौं : भारतीय सेनाका पू’र्वमेजर जनरल जिडी बख्सीले तत्कालिन नेकपा माओ’वादीलाई भारतले काठमाडौैमा श’क्तिमा पुर्याइदिएको खुलासा गरेका छन् । भारतका एक टेलिभि’जनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
अर्नव गोस्वामीले सन्चा’लन गरेको सो कार्यक्रममा नेपालले नयाँ नक्सा सार्व’जपनक गरेपछिको अवस्थाको बारेमा बहस थियो । सो क्रममा उनले “हिन्दु रा’जालाई ‘डिस्ट्रोय’ गरेर माओवा’दीलाई समर्थन गरि वा’मपन्थीलाई सत्तामा आउन स’हयोग गरेपछि चिनिया प्रभाव बढेको” टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले सो कर्म’लाई भारतको आत्म”घाती गोल भनेका छन् । नेपालमा स’शस्त्र युद्ध घोषणा गरेको माओवादी आन्दो’लनलाई भारतको साथ दि’यो भन्ने खुल्दै आएका बेला पूर्व मेज’र जनरलको भनाइृले त्य”सलाई थप पुष्टि गरेको कतिपयको बुझाई छ । उनको भना”ईबारे तत्कालिन माओवादीका नेताहरुले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
सोही बहसमा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द रिजालपनि सहभागि थिए । नेता रि’जालले देशभित्र आन्तरिक विषयमा मतभेद भएपनि सिमाको विषयमा आफु प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको बताएपछि अहिले सर्वत्र उनको चर्चा छ ।
Previous खुशिको खबर: गुगलमा नेपालको नयाँ क्षेत्रफल अप्डेट, भारत पर्यो जि’ल्ल !
Next अभिनेत्री श्वेता खड्का लेख्छिन :भारतसँग लड्न मा’नसिक रुपमा तयार रहनुपर्छ!
44 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता